वायुसेवा कम्पनी र प्राधिकरणको छलफलमा के भयो? :: सविना कार्की :: Setopati
वायुसेवा कम्पनी र प्राधिकरणको छलफलमा के भयो?
प्राधिकरण भन्छ- पार्किङ नियम तत्काल लागू हुन्छ, संघ भन्छ- तयारी गरेर बिस्तारै मिलाउने सहमति भयो
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले ५५ वटा जहाज तथा हेलिकप्टरलाई राति काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पार्किङ गर्न नदिने भएसँगै विवाद सिर्जना भएको छ।
प्राधिकरणले काठमाडौंबाहिर तोकिएको आधार विमानस्थलमा पार्किङ गरी त्यहीँबाट पहिलो उडान गर्न निर्देशन दिएसँगै वायुसेवा कम्पनीहरूले मंगलबार उडानै रोक्ने भने। कम्पनीहरूले यात्रुलाई २४ घन्टाको सूचना समेत नदिई बुधबारदेखि एकाएक सबै उडान बन्द गर्ने भनेका थिए।
तर मंगलबारै राती वायुसेवा सञ्चालक संघ र प्राधिकरणबीच वार्ता भयो। संघले बुधबार थप छलफल गर्ने भन्दै उडान नरोक्ने निर्णय गर्‍यो।
बुधबार दिउँसो दुई पक्षका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि कम्पनीहरूले प्राधिकरणको निर्णयमा सहमति जनाएको प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले बताए।
‘उहाँहरू प्राधिकरणले तोकेको आधार विमानस्थलमै पार्किङ र पहिलो उडान गर्ने कुरामा सहमत हुनुभएको छ,’ महानिर्देशक अधिकारीले छलफलपछि सेतोपाटीसँग भने।
वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता योगराज कँडेल शर्माले भने यो नियम तत्कालै नभइ बिस्तारै कार्यान्वयन गर्ने गरी सहमति भएको बताए। प्राधिकरणले हेलिकप्टरका लागि काठमाडौंबाहिर पार्किङको नियम हिजो मंगलबार र जहाजका लागि असार १३ गतेदेखि लागू गर्ने भनेको थियो। छलफलपछि भने यसलाई बिस्तारै कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको शर्माले बताए।
‘मनसुन सकिएपछि बिस्तारै काठमाडौंबाहिर तोकिएको आधार विमानस्थलबाट रात्री बिसान (पार्किङ) गरी पहिलो उडान गर्ने सहमति भएको छ,’ शर्माले प्राधिकरणसँग भएको छलफलपछि भने, ‘अहिल्यै अनिवार्य गर्न सकिँदैन। यसका लागि हामीले गर्नुपर्ने तयारी बाँकी नै छ।’
हेलिकप्टर भने त्रिभुवन विमानस्थलभित्रकै फुटबल ग्राउन्डमा तत्काल रात्री पार्किङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको उनले बताए। जहाजहरू चाहिँ तयारी गरेर चरणबद्ध रूपमा जाने र त्यसमा प्राधिकरणले सहजीकरण गर्ने सहमति भएको पनि उनको भनाइ छ।
कँडेलको भनाइ मान्ने हो भने तत्कालै प्राधिकरणले तोकेका ५५ वटा विमान र हेलिकप्टरले राती पार्किङका लागि काठमाडौंबाहिर जानु पर्दैन। तर प्राधिकरण आफ्नो निर्देशनअनुसारै हुने बताउँछ। यो नियम मंगलबारदेखि लागू नै भइसकेको प्राधिकरण महानिर्देशक अधिकारीले बताए।
संघले त बिस्तारै लागू गर्ने सहमति भयो भनिरहेको छ नि भनेर सोध्दा प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले उल्टै प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘मैले भनेको भनाइ आधिकारिक होइन र? मैले भनेको नभए कसले भनेको आधिकारिक हुन्छ त?’
अधिकारीले आफूहरूको निर्णयमै सहमति भएकोमा जोड दिँदै भने, ‘क्यानले दिएको निर्देशन तोकिएकै दिनबाट अनिवार्य लागू हुन्छ र हुनुपर्छ।’
बुधबार छलफलमा दुवै पक्षले आफूअनुकूल सहमति भएको बताइरहेका छन्। यसबाट प्रस्ट हुन्छ- दुई पक्ष आ-आफ्नै सूरमा काम गर्ने सोचमा छन्। उडान नरोकिए पनि कम्पनीहरूले पार्किङका लागि बाहिर जानुपर्ने नियम मान्नेमा शंका देखिएको छ। उता प्राधिकरण आफूले गरेको निर्णय हो, लागू हुनुपर्छ भन्नेमा अडिग देखिन्छ।
प्राधिकरणले गत आइतबार नै राती पार्किङबारे निर्देशन जारी गरेको थियो। कुन कम्पनीका कति वटा जहाज कुन विमानस्थलमा पार्किङ गर्ने भनी तोकेर सोमबार पत्र नै पठाएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘उडान सुरक्षा सुदृढीकरण’ को कारण देखाउँदै यस्तो निर्णय गरेको प्राधिकरणले बताएको छ।
विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाका अनुसार हाल त्रिभुवन विमानस्थलमा १७ वटा आन्तरिक जहाज राख्न सक्ने क्षमता छ। अहिले ३४ वटा पार्किङ भइरहेका छन्। बिहान सबैले एकैपटक पहिलो उडान गर्दा ट्राफिक जाम, होल्डिङमा बस्नुपर्ने जस्ता समस्या छ।
हाल ११ वटा हेलिकप्टर कम्पनीका ३० वटा हेलिकप्टरले उडान गरिरहेका प्राधिकरणले जनाएको छ। यीमध्ये २० वटा हेलिकप्टर उपत्यका बाहिरको विमानस्थलमा रात्रिकालीन पार्किङका लागि जानुपर्ने भएको हो। अहिले धेरैजसोले त्रिभुवन विमानस्थलमै पार्किङ गरिरहेका छन्।
हाल नौ वटा वायुसेवा कम्पनीका ५२ वटा जहाज सञ्चालनमा छन्। यीमध्ये १७ वटा जहाज काठमाडौंकै विमानस्थलमा बस्न पाउने छन्। ३५ वटा जहाज भने काठमाडौंबाहिर पुग्नुपर्ने भनिएको हो।
एयरलाइन्सहरू काठमाडौंबाहिर चन्द्रगढी, विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर, भैरहवा, पोखरा, सिमरा, नेपालगन्ज, धनगढी, रामेछाप र सुर्खेत विमानस्थलमा रात्री बिसानका लागि पुग्नुपर्नेछ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ८, २०७९, १९:११:००
हवाई भाडा बढ्यो, कुन रुटमा कति?
पर्यटन क्षेत्रको उत्थान पहिलो प्राथमिकता: मन्त्री श्रेष्ठ
इनफ्लाइट इन्टरटेनमेन्ट सेवा सुरू गर्दै यती एयरलाइन्स
पहिलेकै अवस्थामा फर्कने आशामा पोखराको पर्यटन
प्राधिकरणले भन्यो, 'सटल बस बन्द भएको छैन'